Aqriso Taariikhda iyo Waayaha Nolaleedka Farxiya fiska, Fanka iyo Bilawgii – The official Somali Historical
Sidaa Darteed Dhaayaha.com Xubinta Taariikda Fanka Soomaalida waxa uu Ku soo bandhigayaa Taariikhda Rasmiga ah ee Fanaanadaasi Fanaanada Farxiya fiska waxay ku dhalatay magaalada Wabxo ee ka tirsan degmada Ceelbuur gobolka galgaduud, waxay iyadoo yar ay soo gashay dalka Talyaaniga dibadeedna ay markii danbe uga soo wareegtay dalka Ingiriiska oo ay haatan ku nooshahay.
Dad badan ayaa waxay ka heleen heesaha iyo codka macaan ee wada socda ee Farxiyo la soo baxday, qaar kale waxayba leeyihiin lama arag lamana maqal Farxiyo oo kale 23 kii sano ee dalka burburka ka jiray, Waxay kasbatay taageerayaal fara badan oo qaarkood cawa iyo maalin dhegaha ku haaya codka iyo heesaha kala daran ee Farxiyo Caanka ku tahay.iyadoona aad taasi kadareemaysid marka aad eegto shaashadaha ay somalidu ubadan yihiin sida facbook oo aad arkaysid mashquulka iyo dhegaysiga heesaheeda.
Farxiya Fiska oo ilaah ku maneystay luuq aad u macaan ayaa heesteedi ugu horeysay oo ay qaaday oo ay ku soo caan baxday ay aheyd, heesta Sad iyo calaf inkastoo hees kale ay uga sii horeysay, balse heesta sida weyn ay ugu soo caanbaxday ay aheyd heesta Sad iyo calaf oo ay la qaado fanaanka Diini Cagoos, heestaas oo Ereyada iyo laxanka ba uu la haa isna Abwaan ka sanadka Siciid Sheekh Abuukar Ilka Jiir.
Farxiya Fiska koleey looga faaloon maayo dhamaan inta fanka Somalida xiiseysa oo waa fanaanad la wada garanoyo, faalo iyo amaan waxaa uga filan codkeeda baxsan oo dhagihii maqlaa durbaba ay soo jiidayaan luuqda macaan marka ay heesaha ku luuqeyneyso. Sanadkii tagay waxay fanaanadu soo saartay heesa farabadan oo maqal iyo Muuqaal wada ah oo badan kood ay si talantaali ah ay ula qaado fanaaniin kala duwan sida Fu’aad cumar, Cabikhaaliq Maxamed siraad,
Cabdi Holan iyo fanaan kale ba. Fanaanada Farxiya Fiska waxaa loo doortay fanaanadii ugu fiicneyd sanadkii 2010, taas oo ay ku muteysatay luuqdeeda macaan iyo heesaha aan kala dhicin ay soo saartay mudooyin kii ugu danbeeyay.
Kumanaan Somali ah ayaa fanaanada u codeeyay in ay tahay xidigta sanad ka iyadoo fanaaniin farabadan ay kaga guuleysatay codkaasi loo qaaday, waxaana sidoo kale dhanka raga ku guuleystay codeyntaasi fanaanka isna da’da yar Cabdifitaax yare oo noqday fanaankii loogu jeclaa. Farxiya fiska waxaa dhanka kale dadka Somaliyeed ay ku xasuustan sidoo kale kal hore heesteedii wadaniga aheyd maxaa la isku dilayaa, waxaana sidoo kale sidey sheegtay ay soo wadaa hees wadani ah oo ay fanaanadu curisay maraheeda oo ay ku luuqeyn doonto.
Fanaanada Farxiya Fiska wali fankeedu fara kama qodna, oo dadaal dheeri ah waxay ugu jirtaa sidii ay ku sii horumarin la heyd fankeeda casrigaa, waxayna ku hanweyntahay in ay heer sare ka gaarto mustaqbalka dhow iyo mid ka fog ba Fanka Soomaaliyeed.
Previous: Somalia (1960-present)
Next: Taariikh nololeedkii Maxamed Axmed Kuluc